नेपालको जनजाति, दसैं तिहार र टीका | Everest Times UK
नेपालको जनजाति, दसैं तिहार र टीका
कुनै समय नेपालका राजाका पालाका एक जनजाति मन्त्रीले दसैं र तिहारका खुव विरोध गरेका थिए पाँचथर जिल्लाकै सदरमुकाम फिदिम बजारमा । जनजातिहरुले दसैं तिहार मान्नु हुँदैन । दसैंमा टीका लाउनु हँुदैनसम्म भन्न भ्याएका थिए । भाषण गरिरहेको बेलामा उनी मन्त्री भएका थिएनन् । राजनीतिक पार्टीका गढबढी भएको बेलामा राजाले उनलाई सीधै मन्त्रीमा नियुक्त गरे । पछि आउने दसैंमा उनले राजालाई भेटे । राजाको हातबाट टीका लगाई आशीर्वाद लिए । दसैं तिहारमा टीकाको विरोध गर्ने जनजाति मन्त्री पनि थिए । उनले पनि राजालाई दाम राखेर ढोगे । अनि राजाको हातबाट टीका ग्रहण गरेका थिए ।
अहिले पनि देखिन्छ र सुनिन्छ पनि । अनि भन्नेहरु र दसैं तथा तिहारको शुभकामना दिनेहरुले पनि भन्छ । हिन्दुहरुको महान् चाड दसैं तथा तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना । यता हिन्दु धर्म नमान्नेहरु अनि अरु धर्म मान्नेहरु भनिरहेका थिए । दसैं तिहार हिन्दु धर्म मान्नेहरुको चाड हो । हामी त बौद्ध धर्म मान्नेहरु ल्होसार तथा वैशाख पूर्णिमा मनाउने, किरातहरु चासोक तङनाम मनाउने र इसाइहरुले क्रिसमस डे भव्य रुपमा मनाउने भनेको पनि सुनेकै हो । यस्ता विरोधका भाषण गर्नेहरु फेरि सर्वसाधारण नभएर जनजातिका नेता भनाउँदाहरुले नै हो ।
एकातिर भाषणमा दसैं तिहार नमनाउने पनि भनिरहन्छ । अर्कोतिर दसैं र तिहारमा हेर्नु पर्छ उनीहरु दसैंमा निधारभरि सेतो नलगाइ रातो रङको टीका अनि तिहारमा चार पाँच रङको रङगीविरङगी निधारमा टीका र कम्मरसम्म छुने गरीको भेटेमा तिवारी फूलको माला र नभेटेमा प्लास्टिककै माला भए पनि लाएर हिँडेको देखेकै हो । अनि दसैं र तिहारकै विरोध गरिरहने जनजातिहरुकै जातिगत संस्थाहरु हप्तौ दिनसम्म संस्था व्यवस्थापनको लागि भन्दै नाच लाएर घर–घरमा पुगेर पैसा संकलन गरिरहेको हुन्छ । एकातिर विरोध र अर्कोतिर अवसर । यो विरोधाभाष भएन र ? फेरि सरकार पनि हिन्दु धर्म मान्नहरुले र बौद्ध, किरात र इसाइ धर्म मान्नेहरुले मनाउने चाडको अवसरमा दिने बिदामा विभेद गर्छ । सरकारले बिदा दिँदा कि त नेपालीहरुको राष्ट्रिय चाड भनेर बिदा दिनु पर्ने हो । हैन भने हिन्दु धर्महरुको महान् चाड भनेर सरकारले सात–सात दिन बिदा दिन्छ भने बौद्ध धर्म मान्नेहरुका लागि ल्होसारमा पनि सात दिन । किरात धर्म मान्नेहरुका लागि चासोक तङनामको बेलामा सात दिन र इसाइ धर्म मान्नेहरुका लागि क्रिसमस डेमा पनि सात दिनका दरले बिदा दिनु पर्ने हो ।
एकातिर चाडको अवसरमा सरकारले दिने बिदामा विभेद अर्कोतिर जनजातिहरुले गर्ने विरोध र फेरि तिहारमा जातिगत संस्थाको व्यवस्थापन भन्दै नाच लाएर संकलन गर्ने पैसा । सबै जातिको सबै व्यक्ति देशको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्दैन । नेतृत्व तहमा पुगेकाहरुले प्रत्येक जातिका मानिसहरुले मानेका धर्म गुरुहरु राखेर जनजातिहरुले दशै तिहार मान्नु हुने कि नहुने भन्ने विषयमा छलफल चलाए प्रस्ट हुन्थे होलान् । सामान्य मान्छेहरुले त्यो पनि गाउँघरमा त्यस्तो छलफल गरेर ल दसैं र तिहार नमनाउने र टीका पनि नलाउने भनेर निर्णय गरी कार्यान्वयनमा गयो भने जनजाति नेताहरु राजाको/राष्ट्रपतिको हातबाट टीका थाप्न लाइनमा बसिदिन्छ । अहिलेको सञ्चार कस्तो छ भन्ने त हामी सबैलाई अवगत भएकै हो । अनि त्यति बेला ती सामान्य मान्छेलाई छिमेकीले तपाई टीकाको बहिष्कार गर्नु हुन्छ । तर तपाईको जनजाति नेताले राजाको/राष्ट्रपतिको हातबाट रातो टीका दसैंमा लाए त भनेर नकारात्मक तरिकाले भन्ने गर्दछ । त्यसैले दसैं तिहार मान्ने कि नमान्ने र टीका लाउने कि नलाउने भन्ने विषयमा अन्योल र जनजाति बीचमा भएको विरोधाभाष हटाउन पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो हाला कि ?
विश्व नारी दिवस र बेल्पाली नारी
गोर्खा घोषणाबारे एक गोर्खाको दृष्टिकोण